သင့်ကောင်မလေး ရဲ့ ခလုတ်ကိုဖွင့်ဖို့ နည်းလမ်း ၁၂ သွယ် – Gentleman Magazine
သင့်ကောင်မလေး ရဲ့ ခလုတ်ကိုဖွင့်ဖို့ နည်းလမ်း ၁၂ သွယ်
သငျ့ကောငျမလေး စိတျကွှစဖေို့ နညျးလမျး ၁၂ သှယျ
သင်ကတော့ မီးဖိုချောင်ထဲက ရှောက်သီး ၂ လုံး မြင်တာနဲ့ လိင်ကိစ္စကို စဉ်းစားမိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးတွေ အတွက်ကတော့ အဲ့လောက် မလွယ်ပါဘူး။ သူမရဲ့ ဦးနှောက်ကနေ လိင်ကိစ္စနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေ ထုတ်ပေးနိုင်ဖို့ ခလုတ်တချို့ကို ဖွင့်ပေးရပါမယ်။ အဲဒိ လိင်ကိစ္စ ခလုတ်ဖွင့်ဖို့ နည်းလမ်းတွေကတော့
၁. သင့်လက်တွေကို သုံးပါ
လမ်းလျှောက်နေတုန်းဖြစ်ဖြစ်၊ တီဗွီကြည့်တုန်း ဖြစ်ဖြစ် သူမလက်တွေကို ကိုင်တွဲထားပါ။ အဲဒါဟာ သူမကို ပျော်စေပါတယ်။ သူမလက်မှာ နာဗ်ကြောဆုံးပေါင်း ၄သောင်း ရှိတာ သင်သိပါသလား??
၂. ရေကို အသုံးပြုပါ
ကမ်းခြေနား၊ ရေကန်နား၊ ရေအိုင်နား၊ နောက်ဆုံး ငှက်လေးတွေ ချိုးတဲ့ ရေအိုင် သေးသေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ရေအနားမှာ တူတူနေကြည့်ပါ။ ရေအနားမှာ နေတာဟာ စိတ်ဖိစီးမှု ပြေလျော့စေပါတယ်။
၃. စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတာတွေ လုပ်ပါ
ရိုလာကိုစတာ စီးတာဟာ မိန်းမတစ်ယောက်ကို စိတ်ကြွစေတယ်လို့ ဘယ်သူထင်မလဲ?? ဒါပေမယ့် အဲဒိလို စိတ်လှုပ်ရှားစရာ လုပ်ငန်းတွေ တူတူလုပ်ရတဲ့အခါ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဆက်ဆံရေး ပိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။
၄. သခွားသီးသုပ်၊ Fennel သုပ် လုပ်ပေးပါ
တချို့ အနံ့တွေဟာ လိင်စိတ်ကို ထကြွစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိန်းမတွေအတွက်ကတော့ မတူပါဘူး။ တချို့မိန်းမတွေဟာ သခွားသီးနဲ့ Licorice အနံ့ ရတဲ့ အခါမှာ လိင်အင်္ဂါ သွေးစီးဆင်းမှု မြင့်တက်လာစေပါတယ် တဲ့။
၅. မီးတွေ မှိန်လိုက်ပါ
တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်ပေမယ့် မိန်းမတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အဝတ်မဲ့ ခန္ဓာကို ပြရမှာ ရှက်နေတတ်ပြီး မီးမှိန်လိုက်ရင် သူမကို ပိုပြီး လွတ်လပ်စေပါတယ် တဲ့။
၆. သူမ စိတ်ကူးတွေကို ဖော်ထုတ်ပါ
မိန်းမတွေဟာ လိင်ကိစ္စအကြောင်းကို တစ်နေ့ ၁၉ ကြိမ်လောက် စဉ်းစားတတ်ကြပါတယ် တဲ့။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ သူတို့လုပ်ချင်တဲ့ ပုံစံအကြောင်းကို ပြောရမှာ ရှက်နေတတ်ပါတယ်။ အဲဒါကို ဖြေရှင်းဖို့ သူမကို လိင်စာအုပ်တစ်အုပ် ပေးဖတ်ပြီး သူမအကြိုက်ဆုံး စာပိုဒ်ကို ဖတ်ပြခိုင်းပါ။
၇. တိုးတိုးလေး ကပ်ပြောပါ
ပါတီပဲဖြစ်ဖြစ် ဈေးဝယ်ထွက်ရင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူကြားထဲမှာ သင် သူမကို ခုည ဘာလုပ်မလဲဆိုတာ တိုးတိုးလေး ကပ်ပြောပါ။ မိန်းမတွေအတွက်ကတော့ အဲဒါ ကြားရတာ တကယ် ဆက်ဆံရတာလောက် စိတ်ကြွစေပါတယ် တဲ့။
ကာယလှုပ်ရှားမှုဟာ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကို အထိအတွေ့ကို ပိုမိုတုန့်ပြန်စေပြီး နာဗ်ကြောတွေကို ပိုမိုနိုးထစေခြင်းဖြင့် လိင်ကိစ္စ အသင့် ဖြစ်စေပါတယ်။ သင့် ချွေးနံ့ကလဲ သူ့ကို ဆွဲဆောင်နိုင်လို့ အခုပဲ Gym တူတူသွားလိုက်ပါ။
၉. သူမကို ကျီစယ်ပါ
သူမကို စပါ။ သူမကော်ဖီဖျော်နေတုန်း ပါးလေးတွေကို ကိုင်ပါ။ အပြင်မထွက်ခင် သူမကို လေးစက္ကန့်လောက် တရှိုက်မက်မက် နမ်းလိုက်ပါ။ နံပါတ် ၇ ကို သတိရပါ။
၁၀. အိမ်မှုကိစ္စ တူတူလုပ်ပါ
သန့်ရှင်းရေး တူတူလုပ်တဲ့ အတွဲတွေဟာ ပိုပြီး နီးစပ်ပါတယ် တဲ့။ မိန်းမတွေဟာ သင် သူမတို့ကို စိတ်ဝင်စားတာကို အိမ်ကို စိတ်ဝင်စားတာနဲ့ တူတူပဲ ထင်တတ်ကြပါတယ်။
၁၁. မြန်မြန် လိင်ဆက်ဆံပါ
မရှိတာကို ပိုလိုချင်တတ်ကြပါတယ် တဲ့။ လုပ်ရင်းနဲ့ ရပ်ပစ်လိုက်ရင် သူမ အရမ်းလိုချင်လာပြီး ပိုပြီး Hot ဖြစ်အောင် ဆက်ဆံပါလိမ့်မယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘယ်သူ အရင်ပြီးလဲ ပြိုင်ပါ။ သူမကို အနိုင်ပေးပြီး သင်က ပုံစံအသစ်တစ်မျိုး ပြောင်းဖို့ အခွင့်အရေး ယူလိုက်ပါ။
၁၂. သူမ ဆန္ဒကို သိပါ
သင်တို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်အကြိုက်ကို တစ်ယောက် သိအောင် လုပ်ပါ။ စစ်တမ်းတစ်ခုအရ ၁၅ နှစ်ကြာ တူတူရှိခဲ့တဲ့ စုံတွဲတွေဟာ ၂၆ ရာနှုန်း ပဲ သူတို့ ပါတနာ အကြိုက် ပုံစံကို သိကြပါတယ် တဲ့။ အဲဒါကြောင့် အိပ်ခန်းအတွက် Yes, No, Maybe စာရင်း တစ်ခုလုပ်လိုက်ပါ။
သငျကတော့ မီးဖိုခြောငျထဲက ရှောကျသီး ၂ လုံး မွငျတာနဲ့ လိငျကိစ်စကို စဉျးစားမိမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ မိနျးကလေးတှေ အတှကျကတော့ အဲ့လောကျ မလှယျပါဘူး။ သူမရဲ့ ဦးနှောကျကနေ လိငျကိစ်စနဲ့ဆိုငျတဲ့ ဓာတုပစ်စညျးတှေ ထုတျပေးနိုငျဖို့ ခလုတျတခြို့ကို ဖှငျ့ပေးရပါမယျ။ အဲဒိ လိငျကိစ်စ ခလုတျဖှငျ့ဖို့ နညျးလမျးတှကေတော့
၁. သငျ့လကျတှကေို သုံးပါ
လမျးလြှောကျနတေုနျးဖွဈဖွဈ၊ တီဗှီကွညျ့တုနျး ဖွဈဖွဈ သူမလကျတှကေို ကိုငျတှဲထားပါ။ အဲဒါဟာ သူမကို ပြျောစပေါတယျ။ သူမလကျမှာ နာဗျကွောဆုံးပေါငျး ၄သောငျး ရှိတာ သငျသိပါသလား??
၂. ရကေို အသုံးပွုပါ
ကမျးခွနေား၊ ရကေနျနား၊ ရအေိုငျနား၊ နောကျဆုံး ငှကျလေးတှေ ခြိုးတဲ့ ရအေိုငျ သေးသေးလေးပဲဖွဈဖွဈ ရအေနားမှာ တူတူနကွေညျ့ပါ။ ရအေနားမှာ နတောဟာ စိတျဖိစီးမှု ပွလြေော့စပေါတယျ။
၃. စိတျလှုပျရှားစရာကောငျးတာတှေ လုပျပါ
ရိုလာကိုစတာ စီးတာဟာ မိနျးမတဈယောကျကို စိတျကွှစတေယျလို့ ဘယျသူထငျမလဲ?? ဒါပမေယျ့ အဲဒိလို စိတျလှုပျရှားစရာ လုပျငနျးတှေ တူတူလုပျရတဲ့အခါ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ဆကျဆံရေး ပိုကောငျးမှနျစပေါတယျ။
၄. သခှားသီးသုပျ၊ Fennel သုပျ လုပျပေးပါ
တခြို့ အနံ့တှဟော လိငျစိတျကို ထကွှစပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မိနျးမတှအေတှကျကတော့ မတူပါဘူး။ တခြို့မိနျးမတှဟော သခှားသီးနဲ့ Licorice အနံ့ ရတဲ့ အခါမှာ လိငျအင်ျဂါ သှေးစီးဆငျးမှု မွငျ့တကျလာစပေါတယျ တဲ့။
၅. မီးတှေ မှိနျလိုကျပါ
တိုကျရိုကျမသကျဆိုငျပမေယျ့ မိနျးမတှဟော သူတို့ရဲ့ အဝတျမဲ့ ခန်ဓာကို ပွရမှာ ရှကျနတေတျပွီး မီးမှိနျလိုကျရငျ သူမကို ပိုပွီး လှတျလပျစပေါတယျ တဲ့။
၆. သူမ စိတျကူးတှကေို ဖျောထုတျပါ
မိနျးမတှဟော လိငျကိစ်စအကွောငျးကို တဈနေ့ ၁၉ ကွိမျလောကျ စဉျးစားတတျကွပါတယျ တဲ့။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ဟာ သူတို့လုပျခငျြတဲ့ ပုံစံအကွောငျးကို ပွောရမှာ ရှကျနတေတျပါတယျ။ အဲဒါကို ဖွရှေငျးဖို့ သူမကို လိငျစာအုပျတဈအုပျ ပေးဖတျပွီး သူမအကွိုကျဆုံး စာပိုဒျကို ဖတျပွခိုငျးပါ။
၇. တိုးတိုးလေး ကပျပွောပါ
ပါတီပဲဖွဈဖွဈ ဈေးဝယျထှကျရငျးပဲ ဖွဈဖွဈ လူကွားထဲမှာ သငျ သူမကို ခုည ဘာလုပျမလဲဆိုတာ တိုးတိုးလေး ကပျပွောပါ။ မိနျးမတှအေတှကျကတော့ အဲဒါ ကွားရတာ တကယျ ဆကျဆံရတာလောကျ စိတျကွှစပေါတယျ တဲ့။
ကာယလှုပျရှားမှုဟာ မိနျးမတဈယောကျရဲ့ ခန်ဓာကို အထိအတှကေို့ ပိုမိုတုနျ့ပွနျစပွေီး နာဗျကွောတှကေို ပိုမိုနိုးထစခွေငျးဖွငျ့ လိငျကိစ်စ အသငျ့ ဖွဈစပေါတယျ။ သငျ့ ခြှေးနံ့ကလဲ သူ့ကို ဆှဲဆောငျနိုငျလို့ အခုပဲ Gym တူတူသှားလိုကျပါ။
၉. သူမကို ကြီစယျပါ
သူမကို စပါ။ သူမကျောဖီဖြျောနတေုနျး ပါးလေးတှကေို ကိုငျပါ။ အပွငျမထှကျခငျ သူမကို လေးစက်ကနျ့လောကျ တရှိုကျမကျမကျ နမျးလိုကျပါ။ နံပါတျ ၇ ကို သတိရပါ။
၁၀. အိမျမှုကိစ်စ တူတူလုပျပါ
သနျ့ရှငျးရေး တူတူလုပျတဲ့ အတှဲတှဟော ပိုပွီး နီးစပျပါတယျ တဲ့။ မိနျးမတှဟော သငျ သူမတို့ကို စိတျဝငျစားတာကို အိမျကို စိတျဝငျစားတာနဲ့ တူတူပဲ ထငျတတျကွပါတယျ။
၁၁. မွနျမွနျ လိငျဆကျဆံပါ
မရှိတာကို ပိုလိုခငျြတတျကွပါတယျ တဲ့။ လုပျရငျးနဲ့ ရပျပဈလိုကျရငျ သူမ အရမျးလိုခငျြလာပွီး ပိုပွီး Hot ဖွဈအောငျ ဆကျဆံပါလိမျ့မယျ။ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ဘယျသူ အရငျပွီးလဲ ပွိုငျပါ။ သူမကို အနိုငျပေးပွီး သငျက ပုံစံအသဈတဈမြိုး ပွောငျးဖို့ အခှငျ့အရေး ယူလိုကျပါ။
၁၂. သူမ ဆန်ဒကို သိပါ
သငျတို့နှဈယောကျ တဈယောကျအကွိုကျကို တဈယောကျ သိအောငျ လုပျပါ။ စဈတမျးတဈခုအရ ၁၅ နှဈကွာ တူတူရှိခဲ့တဲ့ စုံတှဲတှဟော ၂၆ ရာနှုနျး ပဲ သူတို့ ပါတနာ အကွိုကျ ပုံစံကို သိကွပါတယျ တဲ့။ အဲဒါကွောငျ့ အိပျခနျးအတှကျ Yes, No, Maybe စာရငျး တဈခုလုပျလိုကျပါ။
Previous: သင့်ချစ်သူကို မဆုံးရှုံးစေပဲ သင့်အိပ်မက်နောက် ဘယ်လို လိုက်ရမလဲ
Next: ၇၈ နှစ် သက်တမ်းရှိတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲက ခေတ်မီနေဆဲ ချမ်းသာဖို့နည်းလမ်း ၁၇ ခု